Bhose August 12, 20142014-08-12T10:49:28+00:002015-04-06T12:41:29+00:00 auto အာမခံ, Featured
Common Sense အများဆုံးအထူးကမ်းလှမ်းချက်နှင့်အတူဖမ်းမိယေဘုယျအားဖြင့်ထိုမျှမကဆိုထားသည်. ပင်ရှိစေခြင်းငှါစဉ်းစားရန်သင့်လျော်သည်တစ်ဦးဖမ်းမရှိ. သင်သည်သူတို့အထဲသို့ get ခင်စဉ်းစားတွေးခေါ်သင့်ရဲ့အစောင့်နေနှင့်သေချာစွာအပေးအယူကိုစစ်ဆေးခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်. ကျွန်တော်စနစ်တကျကျနော်တို့ရဲ့အိမ်စာမလုပ်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ရံမှာကျနော်တို့ကထောင်ချောက်ထဲသို့ပြေးစေခြင်းငှါ, အဲဒီအကြောင်းလွန်းသည် smart ရရန်သို့မဟုတ်ဖွင့်မြန်မြန်လုပ်. ဒီနေရာတွင်ကားအာမခံလွှမ်းခြုံဝယ်ယူတဲ့အခါသတိထားဖ​​ို့ရန်လိုအပ်သည်ထောင်ချောက်တချို့ရှိနေပါတယ်.
ဒီစေတဲ့ Beginner ရဲ့အမှားဖြစ်ပါသည်. သင်ကသင့်အတွက်ရွေးစရာမနှိုင်းယှဉ်ကြပါလျှင်သင်သည်ကောင်းသောလွှမ်းခြုံနှင့်စျေးနှုန်းနေကြပါတယ်သိကြလိမ့်မည်ဟုဘယ်လိုဘာသာရပ်ပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်များမှာမထားရင်? သင်ကားမောင်းနိုင်အောင်အသစ်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်လျင်မြန်စွာဖုံးလွှမ်းရလွန်းစိတ်အားထက်သန်ကြသောအခါ may တစ်ခုမလုံလောက်သောသို့မဟုတ်စျေးကြီးလွှမ်းခြုံသို့ထောင်ချောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို.
ဒါဟာကားတစ်စီးကိုရှာဖွေမှနာရီအနည်းငယ်နှင့်အများအားဖြင့်ရက်ပေါင်းကြာ. သင်အလွယ်တကူအတောအတွင်းတွင်သင့်လျော်သောမူဝါဒများစစ်ဆေးနိုင်သည်. သင်အဘို့အကောက်နှုတ်ချက်စာသားတခုရနိုင်မီသင်သည်ကားကိုပိုင်ဆိုင်စရာမလိုပါဘူး. သင်သည်သူတို့လျင်မြန်စွာသင်တို့နှင့်အတူအတက်ကိုကျွေးမွေး့ပါလိမ့်မယ်ကောက်နှုတ်ချက်စာသားတခုရမှကွဲပြားခြားနားတဲ့ကားကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့တစ်ပွဲစားနေ့စဉ်ဖုန်းဆက်ဖို့မည်ဆိုလျှင်. သို့သော်, အွန်လိုင်း quote ပလက်ဖောင်းတွေသင့်ကိုမပေးတော်မူမော်တော်ယာဉ်များအတွက်ကိုးကားရရန်ခွင့်ပြု. သင်ကအလုပ်လုပ်နေကတည်းကသင်လိုချင်သလောက်ဒီကိရိယာကိုသုံးနိုင်သည်.
မလုံလောက် Coverage ကိုဝယ်ယူ
motorists စေအသုံးအများဆုံးအမှားတစ်ခုမှာသူတို့နိမ့်ဆုံးပြည်နယ်လိုအပ်ပေးရန်တာဝန်အဖုံးအဘို့အသွားလျှင်မူဝါဒများအများကြီးစျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်. အာမခံကြေးအခြေခံလွှမ်းခြုံအကြားကွာခြားချက်နှင့်ပြည့်စုံတစုံတယောက်ကိုသင်ဂရုတစိုက်ပတ်လည်မှာစျေးဝယ်အထူးသဖြင့်လာသောအခါအချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်သာမောင်နှံတစ်စုံတရာဒေါ်လာငွေဖြစ်နိုင်.
အခြေခံပညာအဖုံးအကြွင်းမဲ့အာဏာနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်နှင့်သင်လုံလောက်ပေးရန်တာဝန်မယ့်အစားအဖုံးကိုမဝယ်ရန်အကြံပြုပါသည်. ထို့အပြင်, ဤပေါ်လစီများသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အဘယ်သူမျှမလွှမ်းခြုံပေး. မော်တော်ကားများအများဆုံးလူများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိပါတယ်. အသုံးစရိတ် $5,000 သင်တို့သည်များစွာသောငွေမရှိဘူးတဲ့အချိန်မှာအဟောင်းအသုံးအများဆုံးက auto သည်သင်တို့အဘို့တစ်ကံကြမ္မာတူပုံပေါက်နေလို. သင်သည်ကောင်းမွန်စွာဝင်ငွေနှင့်သင်မောင်းနှင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပိုက်ဆံရှိသည်ကြသောအခါ $50,000 ကားတစ်စီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်. ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးအတွက်ကြောင့်အာမခံမကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်လိမ့်မည်.
ယေဘုယျအားဖြင့်, ထိုပရီမီယံရမြင့်ထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်းအနိမ့်. ဒါကြောင့်, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကားကိုအာမခံ quote သူတို့၏အမျိုးအရာကြွင်းလေသမျှထက်အများကြီးစျေးသက်သာပြီးလျှင်သင်တို့ထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်းစစ်ဆေးသင့်ပါသည်. ဒီနည်းနဲ့သင့်အာမခံအပျက်အစီးများ၏ကျန်ပေးဆောင်နိုင်ခင်မှာသင့်ရဲ့ခါးပိုက်ဆောင်ထဲကအဆပ်ဖို့ရှိသည်ပိုက်ဆံ. သင်ကအရမ်းမြင့်မားသတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်အများဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကျေပေးသွင်းတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ. သင်ကတစ်နှစ်အတွက်တစ်ဦးထက်ပိုကံဆိုးအဖြစ်အပျက်ရှိသည်မှန်လျှင်အသင်တို့အခက်ခဲကြောင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်.
တစ်ဦးစံမူဝါဒသင်နှင့်အတူတူညီအိမ်သူအိမ်သားများအပြင်မည်သည့်ရံဖန်ရံခါယာဉ်မောင်းများတွင်နေထိုင်သောလူတိုင်းကိုဖုံးထားသင့်ပါ. သင်ကစျေးပေါအော်တိုအာမခံ quote ကိုလက်ခံသောအခါသင်သည်သင်၏ကားကိုမောင်းဖို့ခွင့်ပြုသောသူသည်စစ်ဆေးမပြုစေခြင်းငှါ. သင်သည်အခြားမည်သူမဆိုသင်အမှန်တကယ်သာပိုက်ဆံချမ်းသာခြင်းငှါ policyholder မှယာဉ်မောင်းများစာရင်းသွင်းထားတဲ့ယာဉ်မောင်းများကန့်သတ်ရန်လိုပေမည်အာမခံထားယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်ပြုပါရန်မသွားနေတယ်ဆိုရင်. ဒါဟာသင့်ကားကိုမောင်းနှင့်အညီကစီမံခန့်ခွဲရန်သူသည်သိရန်အရေးကြီးသည်နှင့်အတူအဘယ်သူအာမခံမရ.
ထိုမူဝါဒနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအတွက်အထူးအခြေအနေများအဘို့အထွက် watch. ဥပမာအားဖြင့်, မူဝါဒအချို့အာမခံကတစ်ဦးပေးသွင်းနိုင်အော်တိုအောက်ပါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြုပြင်ရေးအတွက် aftermarket အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုလာနိုင်တယ်. သင်အဟောင်းကားတစ်စီးရှိသည်နှင့်မကြောင့်သင်တို့ကိုဤအခြေအနေကောင်းအထူးလျှော့စျေးရရှိကြပါသည်လျှင်ဒါကကြီးမားတဲ့ပြဿနာမဖြစ်စေခြင်းငှါ. သင်ကမျှမျှတတအသစ်များနှင့်စျေးကြီးမော်တော်ယာဉ်ကိုပိုင်ဆိုင်သောအခါသင်တို့သည်ထိုသို့သောအခြေအနေများကိုချင်ကြဘူး.
အဘယ်သူမျှမ Courtesy Motors.com.mm- တစ်ပတ်ရစ်ကား
စျေးပေါမူဝါဒများ၏နောက်ထပ်ပုံမှန်ဝိသေသတို့သည်ကိုယ်တော်၏ဥစ္စာပြန်လည်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည့်ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာအခါသူတို့တစ်တွေယဉ်ကျေးကားတစ်စီးကိုမပူဇော်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်. တနည်းကား, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကြီးမားတဲ့ပြဿနာမဖြစ်စေခြင်းနှင့်သင်အမှန်တကယ်မဟုတ်ဘဲသင့်ကားအစဉ်အဆက်များပျက်စီးလာတယ်ဆိုရင်ယဉ်ကျေးကားတစ်စီးလာပြီထက်ယခုအထူးလျှော့စျေးရရန်ပိုနှစ်သက်စေခြင်းငှါ. လူအတော်များများသည်မိမိတို့မူဝါဒမရှိထိ​​ုကဲ့သို့သောပြဌာန်းချက်ရှိစဉ်အခါသူတို့တစ်တွေယဉ်ကျေးကားတစ်စီးကိုမပေးကြောင်းထိုအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်တိုင်ကြား့.
တစ်ဦးကတစ်ဦးတည်းက auto အာမခံဈေးကွက်တွင်ရောင်းချအားလုံးပေါ်လစီများနှင့်ဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်ယူဆနည်းနည်းအရာကိုမသိဘဲနေကြောင်းမူဝါဒများအတော်ကြာအဆင့်အမျိုးမျိုးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ခံရကြလိမ့်မည်. တိုင်းမူဝါဒတစ်ခုချင်းစီအခြားထံမှအနည်းငယ်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောကွာခြားမှုရှိပါတယ်. ဒီယေဘုယျအားဖြင့်စျေးနှုန်းတွင်ထင်ဟပ်နေသည်. အရ cheapautoinsurance.net, "သင်ခဲ့တယ်ကျေနပ်တဲ့အမူဝါဒထက်လျော့နည်းခြင်းနှင့်သင်တို့ပတ်လည်စျေးဝယ်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်ဆဲအချိန်များတွင်အပြည့်အဝပရီမီယံပေးဆောင်ရနိုင်ပါသည်".
တနည်းကား, တိုင်းကုမ္ပဏီကထပြီးကဲ့သို့တစ်ဦးချင်းစီသည်ဤအကြောင်းကြောင့်တစ်ဦးယုတ္တိမတန်မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကစီးပွားဖြစ်စွန့်စားမှုနှင့်ပရီမီယံတွက်ချက်မှုများနှင့်သူတို့၏စီးပွားရေးလည်ပတ်နေတဲ့ထူးခြားတဲ့လမ်းရှိသည်. ကုမ္မဏီတစ်ခုကအရမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့အခါသူတို့သဘာဝကျကျအန္တရာယ်၏အသုံးအနှုန်းများအတွက်စည်းများ၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်မည်. သူတို့စွန့်စားတစ်ဦးအနည်းငယ်နိမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်သောအခါသူတို့သည်အလျင်အမြန်သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းတွေတက် may. သို့သော်, နည်းတဲ့လူကြိုက်များကုမ္ပဏီသူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျော်အနိုင်ရနိုင်သေချာအောင်စစ်ဆေး၌မိမိတို့စျေးနှုန်းတွေကိုစောင့်ရှောက်ရကြလိမ့်မည်.
လစဉ် Installer အားဖြင့်ပေးဆောင်ခြင်း
ဟုတ်ပါတယ်, ထိုသို့ ပတ်သက်. သံသယရှိစရာမရှိသေး၏လစဉ်အရစ်ကျအားဖြင့်ဆပ်ဖို့လွယ်၏. သို့သော်, အာမခံပရီမီယံစတင်ဖွဲ့စည်းသည့်အချိန်တွင်ငွေပေးချေခြင်းအဘို့အမှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း. ကုမ္ပဏီတစ်ခုသင့်အကြွေးဝယ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုဖြစ်ကြောင်းငွေပေးချေမှုဖြန့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုရင်. ဒီယေဘုယျအားဖြင့်ကုန်ကျမှာလာ. သူတို့ကအများအားဖြင့် upfront ပေးဆောင်သောလူများအတွက်အထူးလျှော့ဈေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အပြည့်အဝရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအကျိုးစီးပွားအခကြေးငွေကောက်ခံ. သင်ကငွေပေးချေမှုကိုပျံ့နှံ့လျှင်သင်ပိုမိုပေးဆောင်ခြင်းအဆုံးသတ်မည်.
အများစုက motorists ကားတွေဝယ်ကသူတို့အသစ်စီးအာမခံထားဖို့လည်းစျေးကြီးကြောင်းနောက်မှသဘောပေါက်. သင်အားကစားကားများထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသောအခါ, SUVs, 4သင်ကသူတို့ကိုအာမခံဖို့စျေးကြီးဖြစ်အံ့သောငှါသတိပြုသင့်ပါသည် x4s နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောသူများ. ပရီမီယံကွဲပြားခြားနားမှုကား A နှင့် B သည်ကားများ၏ရွေးချယ်မှုအကြားသုံးကြိမ်ထက်ပိုသလောက်ဖြစ်နိုင်.
သင်သည်တတ်နိုင်သောမော်တော်ယာဉ်အာမခံရရန်များစွာလျှို့ဝှက်ချက်များကိုသိရန်မလိုအပ်ပါဘူး. ဒါပေမဲ့, သင်သိအနည်းငယ်လှည့်ကွက်များကိုသတိပြုမိဖို့လိုတယ်. ထိုအခါ, သင်သက်တမ်းတိုးပြီးနောက်ပိုက်ဆံသက်တမ်းတိုးချွေတာသိမ်းဆည်းထားနိုင်တယ်. ဤအခြေခံစည်းမျဉ်းများစောင့်ရှောက်ဖို့ပျက်ကွက်သင်ပိုက်ဆံကုန်ကျနိုင်.